ngaba ukhetha ukuhlawulela ifowuni yakho ngezavenge, okanye uyithenge ngqo ngexabiso elipheleleyo lentengiso?
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ngaba ukhetha ukuhlawulela ifowuni yakho ngezavenge, okanye uyithenge ngqo ngexabiso elipheleleyo lentengiso?
Ngaba ukhetha ukuhlawulela ifowuni yakho ngezavenge, okanye uyithenge ngqo ngexabiso elipheleleyo lentengiso?
Ngaba uyazi ukuba iifowuni ezishelfini ezingaphezulu azibizi mali ingama-200 eedola, kodwa ngaba ngokwenene zingasentla kwe- $ 600 ekusungulweni? Ewe, kude kube ngunyaka ophelileyo, uninzi lwababhalisi bezithuthi zaseMelika khange bakhathalele, njengoko iVerizon, i-AT & T, iT-Mobile kunye ne-Sprint bebexhasa kakhulu ezo ziphatho zakho, emva koko baphinda bayifumana inkxaso yabo ngexesha lokuphila kwesicwangciso osibhalisileyo. Ngubani onokucinga ngesivumelwano esinye seselfowuni esidlulileyo sokuba kuyakufika ixesha kwisiseko seminyaka emibini yezicwangciso kunye neeflegi ezixhaswayo ze- $ 199, xa kuya kufuneka uhlawulele eyakho ifowuni ethengisa ngokupheleleyo? Ewe, emva kokuba i-AT & T itsibe umpu ekuqaleni kukaJanuwari , elo xesha ngoku, kwaye sele senzile uthelekiso olucokisekileyo lwezicwangciso zedatha entsha angakuphindi akucele ikhontrakthi yeminyaka emibini kwakhona.
Endaweni yoko unokuyihlawula ifowuni nakwizitolimende zobude obahlukeneyo, ihlala iinyanga ezingama-24, kwaye uyeke nokuhlawula, okanye ulahle imali eyongezelelweyo ukuyihlawula ngokukhawuleza, kuxhomekeke kumphathi kunye nembali yakho yetyala. Kuyavunywa, izicwangciso zedatha engenakhontrakthi, iifizi zokufikelela kunye neentlawulo zokuhlawula iifowuni zibalwa ngendlela apho kungekho & apos; loo mahluko mkhulu ekuphumeni kwenyanga kumphathi ophetheyo ngaphambili. Ngaphandle kwezinto ezimbalwa ezenziwayo ezenza namhlanje ukhuphiswano lomhlaba lube yindawo efanelekileyo yokuphatha, nangona- awunyanzelekanga ukuba uhlawule ixabiso eliqhelekileyo le- $ 199 phantsi kwentlawulo yeselfowni ephezulu, kodwa ngokuyintloko bayayihlawula njenge mboleko yenzala. Ngaphandle koko, ungayithenga ngokuthe ngqo, kwaye uhlawule kuphela i-data tier tier, eqala malunga ne- $ 40- $ 50 ngenyanga, kuxhomekeke kumphathi.
Ngaphaya koko, ngoku ungahamba phakathi kwezicwangciso umjikelo ngamnye wokuhlawula, ukuba kukho into ebhetele eza kuza, kwaye, ukuba uthenga i-handset okanye uze neyakho, awufanele ube nengxaki nezithintelo zakwangoko zokuphucula. Izicwangciso zokufakwa kweT-Mobile kunye neeapos zeefowuni zepremiyamu ngoku zibandakanya ukuphuculwa ukuya kathathu ngonyaka, ke lilizwe elingcono elihlala kulo ngokwenene. Kungenxa yoko le nto besifuna ukukubuza ukuba ungathanda na ukuhlawula ifowuni yakho ngaphambili, okanye ngokuthe ngcembe ngezavenge, ezinikwa izinto ezikhoyo namhlanje. Sitshele kwivoti engezantsi, kwaye siphikise isikhundla kwizimvo.
Ndikhetha ukuyihlawula ngezavenge I & apos; d kunokuba uyithenge ngexabiso elipheleleyoIziphumo zeVoti yokujongaNdikhetha ukuyihlawula ngezavenge 29.84% I & apos; d kunokuba uyithenge ngexabiso elipheleleyo 70.16% Iivoti 1900
ipad pro wifi vs iselfowuni
Qhagamshela isilawuli somphunga kwi-android
Njengomphumo we-blur kwi-Apple iPhone 7 Plus? Insiza entsha izisa kwi-iPhone 7 kunye neemodeli ezindala
IPad Pro (2021) imibala: Isilivere vs iSithuba esiGrey
I-LG Aristo 5 yeyona fowuni intsha inexabiso eliphantsi efumaneka kwi-T-Mobile nakwiMetro
Ukhathazekile akukho zindlebe kwi-US Qaphela ibhokisi ye-20, ke i-Samsung iya kukunika iseti
Uyisebenzisa njani ukukhanya kwesaziso sefowuni ye-Samsung Galaxy